I-PET film-high impahla epakisha impahla enesiqinisekiso sokuphepha.
Ngokuthuthuka komphakathi, abantu banamathela ngokubaluleka kwezempilo. Ukuphepha kokudla kuyinto esemqoka ethinta impilo yabantu ebilokhu ithathwa njengento enkulu ngabakhiqizi bokudla bakwamanye amazwe kanye nokuqapha kokuqondisa. Ukupakisha kokudla, ikakhulukazi, impahla yokupakisha ...
Ukwandisa imakethe yokufunwa kwifilimu ye-BOPET ebonakalayo.
Imakethe yefilimu ye-Optical PET inamandla amakhulu: Ngokuthuthuka okusheshayo kwe-FPD, ubuchwepheshe bokonga amandla. kanye nemboni ye-PV, ifilimu ye-PET ebonakalayo ikhombisa ukuphakama okunamandla kwe-LCD, okungenani ama-7-8pcs wefilimu ye-PET ebonakalayo kufanele isetshenziselwe (ifilimu eline-2 diffuser, ifilimu elilodwa le-prisim, ifilimu yokubambezeleka okungu-2, i-1 a ...
Into Yezindaba 5, ifilimu ye-BEF.
Njengamanje, ubuchwepheshe befilimu be-BEF buphethwe yi-3M, i-TFT LCD, iMerck eJalimane izame ukwephula lesi simo, indlela yokwenza i-gradient evuthayo kwifilimu ngokusabalalisa amakhemikhali amakhemikhali akhanyayo kaMnu DJBroer, Holand, ukwenza N.phase BEF film.kodwa le ndlela kufanele ...